China yakasarudzika Beach Bhegi Kudhinda Dhizaina Bhegi Sackpack fekitori uye vagadziri | Sungnan
Yakasarudzika Mabhangi Bhegi Kudhinda Dhizaina Bhegi Sackpack
Drawstring mabhegi anotendera nyore kuwana kune ako zvinhu nekukasira uye yakapusa kudhonza kweiyo dhizaini.
Model Nhamba: SN-B1104
Ruvara: Orange kana Customized
Chigadzirwa Chigadzirwa Yakasarudzika Mabhangi Bhegi Kudhinda Dhizaina Bhegi Sackpack
Model Nhamba SN-B1104
Ruvara Pepuru kana yakagadzirirwa
Kushandisa Kirabhu, kudzika musasa, kukwira makomo, kufamba, nezvimwe.
Izvi zvine mavara tambo bhegiine tambo ine simba yakapetwa kaviri yekunyaradza uye kutakurika. Iyo yakareruka, yakafara tambo yepamusoro yekuvhara tambo inokutendera iwe kuisa nyore uye kuchengeta shangu dzako, mbatya, mabhuku, zvidiki zvemagetsi uye chero zvishongedzo. Inokodzera varume nevakadzi mune chero zvemukati / zvekunze zviitiko.
Drawstring Backpack: Kuvhara tambo kumusoro kweizvi cinch bhegi inopa inokurumidza, nyore kupinda kune zvemukati kuchengetedza giya rako.
Zvakanaka Size: Kukura 45 * 34cm, yakakura zvakakwana kutakura zvinhu zvakasiyana senge jimeti mbatya & shangu, kushambira magiya, mutambo tauro, mabhuku, zvekushandisa zvezuva nezuva.
Mukurumari & Nyaradzo：Yakagadzirwa nemvura isingadziviriri yepamusoro-soro 210D machira epolyester ayo akasimba uye anomira kupfeka kwezuva nezuva.Tambo dzakakora dzinodzivirira kubva mukuchera mumapfudzi ako uye dzinobatsira kudzikisa mutoro wepfudzi.
MACHINE WASHABLE: Kugezwa ndiko kunofanirwa kune chero tambo yekukweva String Backpack. Yedutambo bhegis michina inogona kuwachika, inokurudzira nyoro sipo uye yakaturika kuti iome!
MULTI-PROPOSE: Tora kushandiswa kwakakura kubva mumabhegi edu eDrawstring. Yakakwana yePati inofarira mabhegi akanaka, maGym mabhegi, Ekusimudzira kupa, Zviitiko zvemubatanidzwa, uye zvimwe zvakawanda!
Gamuchira OEM & ODM: Mabhegi edu e cinch ari 100% 210d polyester & yakagadzirira chero kudhinda kwechidzitiro, embroidery kana kushongedza kwehunyanzvi. Tinokugamuchirai kuti mutaure nesu kuti mushandise maitiro enyu.
* Pachave nekumwe kunhuhwira kana iwe uchiwana, asi inozopera mushure mechinguva.
* Ndokumbirawo nemutsa tendera diki misiyano kubva pamufananidzo unoratidzwa nekuda kwechiedza pakapfurwa mufananidzo.
* Ndokumbirawo unyoro tendera 1-2cm kuyera kukanganisa nekuda kwehukuru hwakayerwa neruoko.
Pashure: Wholesale Yepamusoro Yemhando Camo Inogara Yekuvhima Sport Kunze Kwekunze Dhizaina Bhegi
Zvadaro: OEM Anti-Slip Grip Yoga Trampoline Masokisi Wholesale
camo dhizaini bhegi
Tsika Polyester Tambo Yekusimudzira Yemitambo ...